APT အတန်းငယ် - WDM စနစ်၏ထူးခြားချက်များနှင့် ၄ င်း၏စျေးကွက်လျှောက်လွှာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - Qingdao သည် photonic technologies Co. , Ltd ကိုအသုံးချခဲ့သည်။
APT အတန်းငယ် - WDM စနစ်၏ထူးခြားချက်များနှင့်ယင်း၏စျေးကွက်အသုံးချမှုအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
views:244 အချိန်ထုတ်ဝေ: 2020-08-25
optical fiber ၏ bandwidth ကိုအရင်းအမြစ်များကို 1. အပြည့်အဝအသုံးပြုပါ။ Fiber တွင်ကြီးမားသော bandwidth အရင်းအမြစ်များ (low loss band) ရှိသည်။ Wavelength division multiplexing နည်းပညာသည် fiber တစ်ခု၏ transmission capacity ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်အဆရာပေါင်းများစွာအထိတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် wavelength တစ်ခုထက်တန်ပြန်အနိမ့်အမြင့်တိုးစေခြင်းဖြင့် fiber ရဲ့ transmission capacity ကိုတိုးမြှင့်စေပြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သောတန်ဖိုးနှင့်စီးပွားရေးတန်ဖိုးရှိသည်။
2. signal ကိုပွင့်လင်းဂီယာ။ WDM စနစ်သည်အမျိုးမျိုးသောအလင်းလှိုင်းအလျားများအရ multiplexed နှင့် demultiplexed ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အချက်ပြမှုနှုန်းနှင့်လျှပ်စစ်မော်ဂျူလ် mode နှင့်မပတ်သက်ပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည့်အချက်ပြမှုများကိုဥပမာ - ATM、 SDH multiple IP နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံ (အသံ၊ ဗွီဒီယို၊ ဒေတာစသဖြင့်) အစရှိသဖြင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
3. တိုးချဲ့နှင့်အဆင့်မြှင့်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသည်, စျေးနှုန်းချိုသာသည်။ Wavelength division multiplexer နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ optical fiber ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၏စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ရန်အဆင်ပြေသည်။ ကွန်ယက်တိုးချဲ့မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အကောင်းဆုံးကေဘယ်ကြိုးလိုင်းကိုပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။ အကောင်းဆုံး transmitter နှင့် optical receiver ကိုအစားထိုးရန်သာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်အတွက် www.guangying.com /www.qdapt.com ကိုဆက်သွယ်ပါ။